बेलायतमा नेपाल दिवस, स्वास्थ्यबारे अन्तर्क्रिया
चैत ३१, २०७३ बिहिवार १२:४६:०० प्रकाशित
लन्डन– बेलायतस्थित नेपाली प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरुको संस्था ब्रिटेन–नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलले नेपाल दिसवको आयोजना गरेको छ। बोर्नमथ विश्वविद्यालयमा आयोजित १५औँ नेपाल दिवस (सम्मेलन) मा स्वास्थ्यसहितका विविध विधामा २१ वटा अनुसन्धान प्रस्तुत गरिँदैछ। बुधबार र बिहीबार चल्ने सम्मेलनमा बेलायत र नेपालका करिब ५० जनाको सहभागिता छ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा भएको कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा लिभरपुल जोन मुर्स युनिभर्सिटीका डा. अकनारायण पौडेलले नेपालमा एचआइभी संक्रमितहरुले भोग्नु परेका आर्थिक कठिनाई र समस्यामाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनको अध्ययन अनुसार नेपालमा एचआइभी संक्रमितका लागि सरकारले एआरटी लगायत केही सेवा प्रदान गरे पनि धेरैजसो कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाको यो सम्बन्ध परिपूरक भए पनि कार्यक्रमको दीगोपना र संक्रमितहरुलाई दीर्घकालसम्म सेवा र सुविधा प्रदान गरिरहन नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने उनको धारणा थियो। मस्यौदा तयार भइसकेको एचआभी ऐनलाई संसदबाट पास गरी लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।
एबरिस्टविथ विश्वविद्यालयका डा. देवराज आचार्यले विद्यालयस्तरमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विषयलाई प्रभावकारी रुपमा अध्यापन गराउन सहयोगी तत्वहरुका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। विद्यार्थीहरुमा यौन र प्रजनन विषयको ज्ञान र अवधारणा विकास गर्नका लागि अनौपचारिक अध्यापन शैली, अभिभावक र समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा हुने भेदभावको सम्बोधन लगायतका विधि उपयोग गर्न सकिने डा. आचार्यको तर्क थियो।
त्यसैगरी, नेपालमा किशोरीहरुको महिनावारीका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेकी लिभरपूल जोन मुर्स विश्वविद्यालयकै डा. सारा पार्करले रजस्वला भएका समयमा किशोरीलाई स्थानीय स्रोतबाट बनाइएको स्यानिटरी प्याड प्रयोगको मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यस किसिमकम प्याड वितरण गरी उनीहरुलाई यसको सही प्रयोग गर्न सिकाउन सकिएमा उनीहरुको विद्यालय उपस्थिति र शैक्षिक उपलब्धीका लागि सहयोगी हुनसक्ने उनको अध्ययनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, कार्यक्रममा व्रिस्ट्रल विश्वविद्यालयका डा. पुष्पराज पन्तले नेपालको समग्र स्वास्थ्य संरचना र हालसालै भएका उपलब्धिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै प्राध्यापक पदम सिम्खडाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धी अनुसन्धानको खाँचो रहेको औँल्याए।
कार्यक्रममा नेपालको बालस्वास्थ्यको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै डा. बिमा सिम्खडाले नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा पेशागत क्षमता विकासका लागि बेलायतको नर्सिङ काउन्सिल र अन्य देशमा भएका प्रतिष्ठित विज्ञहरुद्वार नेपालका नर्सहरुलाई तालिम दिन पहल गर्ने बताइन्।